स्मरण शक्ति Archives - Lokpati.com
Tag - स्मरण शक्ति
ज्ञान-विज्ञान • शिक्षा
‘पढ्दा यी उपाय अपनाउनुहोस्, जीवनमा कहिल्यै पछुताउनु पर्दैन’
काठमाडौ‌। पठनमा रमाउन त्यस्तो विधि पढन्ते भइरहनु पर्दैन। तपाईं पठनमा रमाउन सक्नुभयो भने यसले कुनै विषयमा जानकार मात्र बनाउँदैन, गर्न आँटेका काममा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। पठनले हाम्रो सोचाइ र चिन्तनलाई फराकिलो...
बच्चाको स्मरण शक्ति बढाउने १३ उत्तम उपाय
हरेक बच्चामा केही विशेष गुण हुन्छ। हरेक बच्चाको क्षमता फरक फरक हुन्छ। हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ, उसको बच्चा बुद्धिमान र स्मार्ट बनोस्। यसका लागि अभिभावकले पनि विशेष ध्यान दिन दिएर बच्चाको ब्रेन पावर बढाउनका लागि सहयोगी...
ज्ञान-विज्ञान • हेल्थ टिप्स
स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ? पढ्नुस् उत्तम ८ टिप्स्
कहिलेकाहीँ कुनै अनुहार देखेजस्तो लागेको हुन सक्छ। तर, हामीले त्यो अनुहारको नाम बिर्सिन्छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ भनेका हुन्छौँ, ‘मनमा आयो, मुखमा आएन।’ खासमा यो हाम्रो स्मरण शक्ति कमजोर भएकाले हो।
भनिन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा...
स्मरण शक्ति बढाउने पाँच महत्वपूर्ण सुत्र
काठमाडौं । किशोरावस्था हुँदा तपाईँको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो, जे कुरा पनि सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले हिजोकै कुरा पनि सम्झिन गाह्रो परिरहेको छ, यस्तो किन हुन्छ ? मानिसको सम्झिन सक्ने क्षमता धेरै कुरामा भर...
स्मरण शक्ति बढाउने ८ घरेलु तरीका
प्रत्येक मानिस जीवनमा सफलता चाहिरहेको हुन्छ। तर, चाहनाले मात्र कोही पनि सफल बनिहाल्दैन । त्यसका लागि धेरै कुराको सन्तुलन र संयोग पनि मिल्नुपर्छ । कुनै पनि कर्ममा सफलता हासिल गर्न शारीरिक र मानसिक लगाव, सक्रियता, दृढता...
पढेको बिर्सने बानी छ ? यी हुन् सम्झिने १२ सुत्र
१२ माघ २०७५, शनिबार
काठमाडौं । हामी नेपालीहरु पढ्न त पढ्छौं । तर, पढाइमा कुनै योजना छैन, अन्धाधुन्ध मात्र । अन्धाधुन्ध पढिने पढाइले हाम्रो समय मात्र बर्वाद गर्दैन, पढेको कुरा भुल्ने सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ ।
हामीले योजना बनाएर पढ्यौं भने धेरै...
पढाइले तनाव घटाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ (७ टिप्स्)
काठमाडौं । प्रविधिमय आजको यो युगमा धेरैले त्यसको फाइदा लिएका छन् भने कतिले त्यसमा समय बर्बाद गरेका हुन्छन् । तर, सामाजिक सञ्जालहरुमा समय खेर फाल्नुभन्दा धेरैजसो शोधले पढ्नु मनोवैज्ञानिक र संज्ञानात्मक हिसाबले निकै उपयोगी...